आँचल शर्माले महानायक छोडेर आफुलाई रोज्दा पल शाहको यस्तो जवाफ । बिहे कोसँग र कहिले गर्ने भन्ने प्रश्नमा पल यसो भन्छन् (भिडियो हेर्नुस) – Classic Khabar
June 23, 2021 205
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा महानायकको रुपमा पल शाहलाई चिनिन्छ । हमालले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई दिनु भएको योगदानको कदर गर्दै फिल्मकर्मी र दर्शकहरुले हमाललाई यो उपमा दिनु भएको हो । राजेश हमालको बिषयमा गलत बोल्दा धेरै चर्चित कलाकारहरु समय समयमा बिवादमा पनि आएका छन् । यसैबिच नायिका आँचल शर्माले एक अन्तर्वार्तामा दिएको उत्तर सामाजिक सन्जालमा भाईरल भयो ।
आँचलले प्रकाश सुवेदीको रजतपट कार्यक्रममा महानायक राजेश हमाल र पल शाह रोज्न लाउँदा पल शाहलाई रोजिन् । यो रोजाई पछि धेरैले आँचलको रोजाईलाई सहर्ष स्विकारे भने कतिले यो रोजाईको बिरोध पनि गरे । पछिल्लो समय बिभिन्न सामाजिक कामहरु गर्दै कलाकारिताबाट पाएको क्रेज भन्दा माथि रहेका नायक पल शाहलाई आँचलले सामाजिक काममा अर्को रियल हिरोको भुमिका निभाएका कारणले पनि रोजेकी थिईन् ।
यसैबिच एक अन्तर्वार्तामा आँचलले आफुलाई रोेज्दा पलको धारणा आएको छ । पल शाहले राजेश हमाललाई भगवान मान्दछन् । आँचलले राजेश हमाललाई नरोजिरहँदा पलले के भने ? उनलाई सोही अन्तर्वार्तामा बिहे कहिले गर्ने भन्ने बिषयमा पनि सोधिएको थियो । जसमा उनको उत्तर यस्तो थियो । भिडियो हेर्नुस
Prevजातका कारण कोठा नदिएको आरोपमा प्रमाण नपुगेपछि घरबेटी महिला रिहा, सुनियोजित रुपमा फसाएको नेवाःदबूको आरोप
Nextकठै ! छोरा-बुहारिले घरबाट निकालेपछि यी ९० बर्षिय बृद्ध बुवा यसरी झुपडिमा रुदै भोकभोकै (हेर्नुस् भिडियो )
घट्यो पत्याउनै नसक्ने घटना व्यापारीले गरे ग्राहकमाथि यस्तो ब्यबहार
अस्ताए नेपालका अर्का चर्चित ब्यावसायीको मृत्यु
गोरु का’टेर मासु ओसार्ने पाँचजना पक्राउ